I-Wrike: Khulisa Ukukhiqiza, Ukusebenzisana, futhi Uhlanganise Ukukhiqizwa Kwakho Kokuqukethwe | Martech Zone
Angiqiniseki ukuthi yini esizokwazi ukuyenza ngaphandle kwe- ipulatifomu yokubambisana komkhiqizo wethu wokuqukethwe. Njengoba sisebenza kuma-infographics, amaphepha amhlophe, kanye nokuthunyelwe kwebhulogi, inqubo yethu isuka kubacwaningi, iye kubabhali, kuya kubaklami, kubahleli namakhasimende ethu. Labo bantu baningi kakhulu ababandakanyekile ukudlulisa amafayela emuva naphambili phakathi kweGoogle Docs, iDropBox noma i-imeyili. Sidinga izinqubo nokuvuselelwa ukuze kuqhubekele phambili phambili kumaphrojekthi amaningi aqhubekayo.
Qhwa yakhelwe ngokukhethekile ukusebenzisana kokuqukethwe - esebenza njengehabhu eliphakathi lokuphatha imithombo yakho yezabasebenzi kanye nokuhlanganiswa nengqalasizinda yakho yangaphandle. Izici zifaka:
Izabelo Zomsebenzi - Hlela konke okudingayo ukuze uqedele iphrojekthi yakho endaweni eyodwa. Hlukanisa imigomo emikhulu ibe izingcezu ezilawulekayo, unamathisele amafayela, bese usetha izinsuku ezifanele. Landelela kalula inqubekelaphambili yonke kanye nomnikelo ngamunye.
Ukuxhumana - @mention ozakwabo obadinga ukwenza umsebenzi futhi bazobona ngokushesha umyalezo wakho endaweni yabo yokusebenza. Ungafaka futhi abasebenzisi abavela ngaphandle kwenkampani yakho.
Ukukhiqiza nge-imeyili - Ngokuchofoza okukodwa uguqula i-imeyili ibe ngumsebenzi bese uyithumela ku-Wrike ukuze kwenziwe okuthile.
AmaDashboard - Dala ukubukwa okwenziwe ngokwezifiso kwamaphrojekthi abaluleke kakhulu afaka amagrafu, izimo zemisebenzi, nezibuyekezo zesikhathi sangempela.
Izindabafeed - Ukuvuselelwa kuyo yonke imisebenzi yephrojekthi kunikela ngemibiko yesimo esisheshayo futhi kunqunywe imihlangano nokuxhumana nge-imeyili ngesigamu ukuze ukwazi ukugxila ezintweni ezibalulekile.
Ukuhlela Kwethimba - Hlela, wabelane futhi uhlanganyele kumadokhumenti ku-inthanethi nangesikhathi sangempela nethimba lakho.
Izilawuli Zokufinyelela - Ukunikeza izinga elifanele lezilawuli zokufinyelela, ukudala amaqembu womsebenzisi wangokwezifiso nokwabelana ngokukhetha ngamafayela kuqinisekisa ukuthi abantu abalungile bathola imininingwane abayidingayo ukuze basebenze kahle.
Ukuhamba Ngokwezifiso Ngokwezifiso - Yenza lula inqubo yakho futhi uthole ukubonakala emsebenzini esigabeni ngasinye. Dala ukugeleza komsebenzi wakho ngezinqubo zokuvunywa
Izinkambu Zokwezifiso - Faka izinkambu zakho zenkambiso kunoma iyiphi iphrojekthi noma umsebenzi bese ulandelela ukuthi yini ebaluleke kakhulu ebhizinisini lakho.
Resource Management - Izinsiza ze-Balance nokulandela ngomkhondo ishadi lokusha.
Ukulandelela isikhathi - Gcina umkhondo wokuthi isikhathi sisetshenziswa kanjani ngephrojekthi noma yilungu leqembu ekuhleleni ngokunembile nokuphathwa kwesabelomali
Ukuhlanganiswa kwekhalenda - Vumelanisa imisebenzi kanye ne-milestones yephrojekthi cishe kunoma yiliphi ikhalenda kufaka phakathi i-Google Calendar, i-Outlook Calendar, ne-iCalendar.
Izicelo zeselula - Qhwa inezicelo zomdabu ze-Android ne-iOS ukuze ukwazi ukulandela umkhondo futhi wenze imisebenzi noma ngabe ukude netafula lakho.
Ukuze uthuthukise umkhiqizo wakho, ungaphinda futhi iphrojekthi, ukopishe imisebenzi oyinikiwe kanye nezinsuku.
I-Wrike iphinde inikeze ukuhlanganiswa ne-Google Apps, i-Chrome, i-Dropbox, i-Box, i-Microsoft Project, i-Microsoft Excel, i-Microsoft OneDrive, i-SAML, i-Salesforce, i-iCal, i-Zapier, i-Evernote, i-Wufoo, i-HipChat, i-WordPress, i-Slack (esiyithandayo), i-Zendesk, I-Hubspot, Izincwadi ezisheshayo, i-LinkedIn, i-Marketo, i-ProofHQ, i-Harvest, i-SurveyMonkey, i-Okta neBitium!
Bhalisela Isivivinyo Samahhala ku-Wrike
Inothi nje - sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo ngaphakathi kwalesi sihloko.
Tags: i-bitiumIbhokisichromeukusebenzisana kokuqukethweukukhiqizwa kokuqukethweimisebenzi yokuqukethweukuhamba komsebenzi kokuqukethweukugeleza kokusebenza kokuqukethweIbhokisi lokudonsaEvernoteizinhlelo zokusebenza ze-googleHarvestI-HipchatindawoiCalLinkedInumabhebhanaI-Microsoft ExcelMicrosoft OneDriveI-Microsoft ProjectkulungileubufakaziAma-QuickbookssalesforceI-SAMLukuxegaSurveyMonkeyWordPressWrikeawuzapperzendesk